Fifandimbiasana eo anelanelan'ny mofomamy mofomamy sy soda
Ny fahasamihafana eo anelanelan'ny mofomamy mofomamy sy mofomamy
Famotehana ny mombamomba azy ireo
Ny soda vita amin'ny soda sy ny vovo-bàla dia fitaovana fampiasa amin'ny solika, izay midika fa izy ireo dia ampiana entana amidy alohan'ny hanangonam-bokatra mba hamoahana gazy karbonika ary hampitsangana azy ireo. Ny vovo-trondro dia miteraka soda, fa ny zavatra roa dia ampiasaina amin'ny fepetra samihafa.
Ny soda mofomamy dia bikarbonate bakteria madio. Rehefa mitambatra ny fofona soda dia misy ny hafanana sy ny zavatra azo avy amin'ny asidra (toy ny yogourt, sôkôla, ronono, tantely), ny vokatra simika vokariny dia mamoaka bio-gazy karbonika izay manitatra ny elanelana ho an'ny oven, ka miteraka entana na entana.
Ny fanehoan-kevitra dia manomboka avy hatrany rehefa mifangaro ny ingredients, noho izany dia mila mamolavola resipe izay miantso ny soda avy hatrany, sao dia ho lavo izy ireo!
Ny kitapo mofomamy dia misy bikarbonate siramamy, saingy ao anatin'izany ny mpangorohan-tosi-drà ( sarda tartar ), ary koa ny fanafody mando (matetika ny tiroida). Ny vovo-trondro dia azo ampiasaina ho vovoka poakaty tokana ary asidra vovoka poakaty dipoavatra. Ny paompy tokana dia mihetsika amin'ny fahamendrehana, noho izany dia tsy maintsy mamolavolanao resipeo izay ahitana ity vokatra ity avy hatrany rehefa mifangaro. Ny dingan'ny dipoavatra dia mihetsika ao anatin'ny dingana roa ary afaka mijoro mandritra ny fotoana kelikely alohan'ny famokarana. Miaraka amin'ny vovoka dipoavatra, misy entona entina amin'ny hafanana amin'ny efitra rehefa ampidirina ao anaty koba ny vovony, fa ny ankamaroan'ny gazy dia alefa aorian'ny fampitomboana ny faritry ny ovy ao amin'ny oven.
Ny sakafo sasany dia miantso ny soda baka, fa ny hafa kosa miantso ny vovony.
Ny fitaovana ampiasaina dia miankina amin'ny zavatra hafa ao amin'ny recipe. Ny tanjona faratampony dia ny mamokatra vokatra mamy miaraka aminà tora-kazo mahafinaritra. Ny soda mofomamy dia fototra ary manome savoritaka mangidy raha tsy manohitohina ny asidra ny zavatra hafa, toy ny buttermilk. Hahita sodin-tsakafo ao anaty cookie ianao.
Ny vovony vita amin'ny kitapo dia ahitana asidra sy fototra ary misy fiantraikany amin'ny atsy tsy an-drariny amin'ny resaka tsiro. Ny fitsangatsanganana izay mitaky ny fanondranana vovoka dia matetika mangataka ny fanangon-tsakafo hafa tsy misy atiny, toy ny ronono. Ny vovo-mofo dia zavatra mahavelona amin'ny mofo sy mofo.
Manoloana ny Recipes
Azonao atao ny manolo vovoka bakteria ho an'ny soda fanenanao (mila ilaozanao vovoantitra bebe kokoa ary mety hisy fiantraikany amin'ny tsirony), saingy tsy afaka mampiasa soda amin'ny fetibe ianao raha misy fangatahana mandefa poezia. Ny soda mofomamy irery dia tsy ampy ny asidra mba hahazoana masom-borona. Na izany aza, afaka manamboatra ny vovony ianao raha manadio soda sy siramamy amin'ny tartar. Mofomamy tsiramamy siramamy roa amin'ny sarda iray.
Famakiana mamaky teny
5 Fitaovana Fitaovana tsotra
Fanamboarana fitaovana mahavelona
Ahoana no anaovana Baking Powder Works
Ahoana ny fomba itondran'i Baking Soda
Manova ny volavolan-dalàna mankany amin'ireo mpitrandraka
Famaritana ny endriky ny matoanteny ionika
Francesco Redi: mpanorina ny biolojian'ny fanandramana
Fomba entina manosika ny rehetra
Ireo endrika roa amin'ny angovo
Lisitry ny matanjaka matanjaka
Ohatra avy amin'ny Petrochemicals and Products Petroleum
Nahoana no zava-dehibe ny Graphene?
Firy ny Loka Nobel?
Nahoana izy no marika ho an'ny pounds?
Hazo tsara ho an'ny fiainana, sisin-tany ary ala
Toe-Balanced Putter: inona ny iray, iza no mpilalao golf tokony hankasitraka
Teny nalaina avy amin'ny famonoana mpanararaotra
Sprites sy ny fianakaviany
Olomasina Superhero: Bilocation, ny hery hipoitra amin'ny toerana roa
Nahoana ny mpianatra no mitsikera sy manala azy ireo?
Shakespeare dia nalaza nandritra ny 400 taona
Ratsy ve sa Manala An-tany?
Ny Filoha Veto Veto ihany no afaka mandoa vola
Fetin'ny mpifankatia mahafinaritra ho an'ny Fitiavanao
Mangataka fanazavana ho an'ireny tahirin-tsarimihetsika tsy misy fotony ireny isika
Ny Tranombokin'i Ashurbanipal - Boky Mesopotamien'ny 2 600 taona
Mividiana ny Skateboard ho anao
Biography of Montgomery Clift
Sheryl Underwood Biographie
Ny fianarana ambony indrindra amin'ny fianarana an-tserasera
Sekoly Private Private ao Dallas
Fandaharam-pampianarana Grammar ny ESL: Ahoana no fampiasana "Like"
Ilay mpamosavy any an-tendrombohitra Meksikanina